I-XtraDeb: Indawo enhle kakhulu ye-PPA yezinhlelo zokusebenza nemidlalo ye-Ubuntu | Kusuka kuLinux
Noma ngabe siyikho abasebenzisi yohlobo oluthile lwe Ubuntu, noma ezinye Ama-Distros ithathwe njenge Mint noma ukufana okuhambisanayo Debian o MX, noma enye I-GNU / Linux Distro, konke I-Linuxero imvamisa ufuna eyakho Izinqolobane zomdabu letha izinguqulo zamanje eziningi kakhulu izinhlelo zokusebenza nemidlalo. Kodwa-ke, lokhu akunjalo ezimweni eziningi, futhi kuvame ukuphendulwa Izinqolobane zangaphandle, njenge, XtraDeb.
XtraDeb isanda kudalwa Indawo yokugcina i-PPA ye-Ubuntu kanye nokuphuma noma okuhambisanayo, eqala ukukhula, ukusabalala nokunikela ngezinhlelo zokusebenza nemidlalo emihle kakhulu futhi yamanje.
Noma ngabe kungukusetshenziswa noma imidlalo, yiba nawo futhi uwasebenzise kunguqulo yawo yamanje ngokusebenzisa i- ukufakwa kwesiteshi esisodwa, kubalulekile ukuthi inani elikhulu labantu libazi futhi balisebenzise, ​​futhi balisebenzisele yenza kubonakale, usize futhi usakaze umsebenzi wabathuthukisi bayo. Ikakhulukazi lapho Imidlalo kuyakhulunywa, ngoba, kuyinto indawo ebalulekile okumele ngaso sonke isikhathi sithuthuke Linux.
Ngecala elithile lemidlalo, ngaphambi kokuthi libalwe ikakhulu, ngecala le- Ubuntu, bususelwa futhi buhambisana, nge I-PlayDeb, kepha njengoba sonke sazi, igquma elifanayo eminyakeni eminingi eyedlule, njengoba ubona encwadini yethu ehlobene nale ndaba.
Sala kahle ku-GetDeb naku-PlayDeb ... okungenani okwamanje
Noma kunjalo, sihlala sinefayela le- indlela yakudala sisebenzisa i- umphathi wephakheji ukwazi ukwenza okwethu I-GNU / Linux Distros una I-Distro Gamer. Njengoba kushiwo kokuthunyelwe kwethu okuhlobene ngezansi:
1 I-XtraDeb: Indawo yokugcina i-PPA enemidlalo nezinhlelo zokusebenza ezibuyekeziwe
1.1 Kuyini i-XtraDeb?
1.2 Ungayifaka kanjani i-XtraDeb?
1.2.1 Ku-Ubuntu nakwamanye ama-derivatives
1.2.2 Kuma-Debian nakokuphuma kokunye
I-XtraDeb: Indawo yokugcina i-PPA enemidlalo nezinhlelo zokusebenza ezibuyekeziwe
Njengoba sishilo ngaphambili, i-XtraDeb iyi- Indawo yokugcina i-PPA ye-Ubuntu kanye nokuphuma noma okuhambisanayo, eqala ukukhula, ukusabalala nokunikela ngezinhlelo nemidlalo emihle kakhulu futhi yamanje. Noma kunjalo, kusayithi lakho iwebhusayithi esemthethweni ku-LaunchPad, lokhu okushiwo ngakho:
"Inhloso yale phrojekthi ukuhlinzeka ngamaphakeji wesoftware ongeziwe (nokubuyekezwa okuthile) wezinguqulo zamanje ze-Ubuntu ngokushesha nje lapho sezitholakala. I-XtraDeb isinyathelo esizimele esihlose ukuhlinzeka ngamaphakeji esoftware yakamuva ngenguqulo yamanje ye-Ubuntu. Izinqolobane ze-XtraDeb zandisa amakhosombe asemthethweni, zihlinzeka ngamaphakeji angeziwe futhi, kwezinye izimo, inguqulo yakamuva yalezo ezikhona."
UMdali wakho, UJhonny Oliveira, uhlanganisa i- iqoqo elihle kakhulu lezinhlelo zokusebenza nemidlalo ezinqolobaneni zalo, ezikhumbuza abaningi bethu, abanyamalalayo I-PlayDeb. Okwamanje, emkhakheni we Imidlalo, ithe indawo yokugcina inikeza lokhu okulandelayo uhlu lwemidlalo, okuzokhula ngokuhamba kwesikhathi:
Futhi emkhakheni wezicelo unikeza okulandelayo uhlu lohlelo lokusebenza:
Ungayifaka kanjani i-XtraDeb?
Ku-Ubuntu nakwamanye ama-derivatives
Kuma-Debian nakokuphuma kokunye
Dala ifayela lokugcina le-XtraDeb
Faka okuqukethwe okulandelayo (umthombo wesoftware):
Faka ukhiye wokugcina
Vuselela uhlu lwamaphakeji
Lapho zonke lezi zinyathelo sezenziwe, singafaka noma iyiphi ye Izinhlelo zokusebenza nemidlalo ye-XtraDeb, kucatshangelwa lokho, lapho kwenziwa kufayela le- I-Debian Distro kanye nokuphuma kukho, impela eziningi zezicelo zizoba nzima ukuzifaka, ngenxa yezinkinga zokuncika. Ngokwami, i I-Urban Terror 4.3.4 umdlalo Mayelana nami I-GNU / Linux Distro, ayizange inikeze izinkinga zokuncika.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «XtraDeb», Indawo Yokugcina ye-PPA ye-Ubuntu kanye nokuphuma kokunye noma okuhambisanayo, okuqala ukukhula, ukusabalalisa nokunikela ngezinhlelo nemidlalo emihle kakhulu futhi yamanje; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » I-XtraDeb: Indawo enhle kakhulu ye-PPA yezinhlelo zokusebenza nemidlalo ye-Ubuntu
UJose Juan kusho
I-Youtube-dl ayibuyekezwa ku-repo «ppa: xtradeb / apps», ngoba ingu-2020.11.29-1 (yanamuhla, 08/12/2020, i-youtube-dl ikwinguqulo 2020.12.07, ebuyekezwe ngaphambilini ); lokhu kuyinkinga ngoba i-youtube-dl kufanele ihlale isesikhathini njalo.
IMegamario ipholile !!
Phendula uJosé juan
Ngiyabingelela, José Juan. Siyabonga ngokuphawula kwakho. Sethemba ukuthi umlondolozi wakho uzobheka futhi abuyekeze zonke izinhlelo zakho zokusebenza ngokuzikhandla okukhulu.
I-LibreOffice Office Suite: Kancane kancane kwakho konke ukufunda kabanzi ngakho